रबिनालाई किन एक्का'सी रिस उठ्यो ? स्पन्दनलाई झा'पड हान्न जाँदा बबा''ल मच्ची'यो (भिडियो हेर्नुहोस्) - Public 24Khabar
Home Entertainment रबिनालाई किन एक्का’सी रिस उठ्यो ? स्पन्दनलाई झा’पड हान्न जाँदा बबा”ल मच्ची’यो...
रबिनालाई किन एक्का’सी रिस उठ्यो ? स्पन्दनलाई झा’पड हान्न जाँदा बबा”ल मच्ची’यो (भिडियो हेर्नुहोस्)
रबिनालाई किन एक्का’सी रिस उठ्यो ? स्पन्दनलाई झा’पड हान्न जाँदा बबा”ल मच्ची’यो
मुगुमा ट्रकमार्फत ढुवानी भएको चामल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा राखिँदै। तस्बिर : राजबहादुर शाही
मंसिर ११, २०७७राजबहादुर शाही, हरि गौतम
हिमपात सुरु नहुँदै कोटाअनुसारको खाद्यान्न पुर्याइसक्ने तयारी
मुगु/रुकुम पश्चिम — मुगु र डोल्पामा आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनापछि खाद्यान्न ढुवानीको चटारो सुरु भएको छ । मुगुमा खाद्य गोदाम रित्तिएको लामो समयपछि सुर्खेत, नेपालगन्ज र बर्दियाको राजापुरबाट चामल ढुवानी सुरु भएको हो ।
हिमपात सुरु नहुँदै यो वर्षको कोटाअनुसारको खाद्यान्न पुर्‍याइसक्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको तयारी छ । भारी हिमपातका कारण बर्सेनि कर्णाली राजमार्ग र नाग्मा–गमगढी सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । गमगढीमा यो वर्ष स्वीकृत गरिएको ११ हजार क्विन्टल खाद्यान्नमध्ये २ हजार ६ सय ८० क्विन्टल चामल ढुवानी भइरहेको छ ।
दुई हजार क्विन्टल कोटा तोकिएको सोरु खाद्य डिपोमा ६० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी भइसकेको छ भने श्रीकोटमा १ सय ५० क्विन्टल चामल पुगेको छ । हिमपातको समय नजिकिएपछि चामल ढुवानीलाई तीव्रता दिइएको कम्पनीका निमित्त शाखा प्रमुख पुष्कर भामले बताए । सोरु गाउँपालिकाको कालै बिक्री केन्द्रमा चामल गए नगएकोबारे अध्ययन गर्न मंगलबार प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाको टोली पठाइएको छ । कालैमा बिक्री गर्न सुर्खेतबाट ल्याइन लागेको चामल वीरेन्द्रनगरको शर्मा ढुवानी सेवाले भक्तपुर पठाउन लागेको भेटिएको थियो ।
मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाको पुलु डिपोमा भने यो वर्ष स्वीकृत भएको चामल अझै पुगेको छैन । पुलुमा खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा विवादित शर्मा ढुवानी सेवाले पाएको छ । यो वर्ष पुलुका लागि १ हजार ७ सय ५० क्विन्टल चामल स्वीकृत भएको निमित्त प्रमुख भामले बताए । डिपोमा चामल नपुगेपछि मुगु, डोल्फु, कार्तिक, किम्री, ताख, खारी, मह, रिउसलगायत १८ वटा बस्तीका बासिन्दा महँगो मूल्यमा बजारको चामल खरिद गरी उपभोग गर्न बाध्य छन् । २५ किलो चामल २ हजार रुपैयाँमा बजारबाट किन्ने गरेको स्थानीय तोर्चे तामाङले बताए ।
चामल नआउँदा झन्डै १३ हजार जनसंख्या रहेको मुगुमकार्मारोङका बासिन्दालाई छाक टार्न समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले बताए । ‘एक त खाद्यान्न कोटा नै कम छ, त्यही चामल पनि समयमै आउँदैन,’ उनले भने, ‘सिँचाइको अभाव र चिसोका कारण स्थानीय उत्पादन न्यून हुँदा सबै नागरिक बाहिरको चामलको भर पर्न बाध्य छन् ।’
डोल्पामा बल्ल ठेक्का
दुई वर्षदेखि सरकारी अनुदानको चामल नपुगेको माथिल्लो डोल्पामा बल्ल ढुवानीको ठेक्का लागेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले माथिल्लो डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोङ र सेफोक्सुन्डो गाउँपालिकामा चामल ढुवानीका लागि ठेक्का लगाएको हो । तीन वटै स्थानीय तहमा एउटै ठेकेदार कम्पनीले ढुवानीको जिम्मा पाएको छ । सुर्खेतदेखि स्थलमार्ग भएर डोल्पामा चामल ढुवानी गरिने कम्पनीको डोल्पा शाखा प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताए । उनका अनुसार कम्पनीको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । बोल–कबोलका आधारमा दिनेश निर्माण सामग्री सप्लायर्स बाँकेले खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा पाएको छ ।
सप्लायर्सले सुर्खेतदेखि डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको केन्द्र धो, छार्काताङसोङको ढारगाउँ र सेफोक्सुन्डोको साल्दाङसम्म चामल ढुवानी गर्नेछ । कम्पनीले धोसम्म प्रतिक्विन्टल ८ हजार ४ सय ८०, ढारगाउँसम्म ९ हजार ४ सय ९० र साल्दाङसम्म १० हजार ९ सय ९५ रुपैयाँमा चामल ढुवानी हुने जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षभरि डोल्पामा अनुदानको चामल ढुवानी भएन भने कोरोना कारण थप समस्या भएको थियो । गत वर्षसम्म चीनबाट चामल ढुवानी हुन्थ्यो । कोरोना महामारीका कारण चीनले सीमा नाका बन्द गरेको छ । अब चामल आउला कि भन्ने आश पलाएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका कर्मा गुरुङले बताए । ‘सरकारी चामल आए विपन्नलाई सुबिस्ता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म चामल किन्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’
यसअघि कम्पनीले काठमाडौंबाट सोझै चामल ढुवानी गर्दै आएको थियो । चीनतर्फको नाका बन्द भएपछि स्थलमार्गबाट पहिलोपल्ट चामल ढुवानी हुन लागेको हो । शाखा प्रमुख पाण्डेले केही दिनमै डोल्पामा खाद्यान्न पुग्ने बताए । उनका अनुसार सस्तो चामल ४ हजार ९ सय र महँगो चामल ६ हजार ६ सय रुपैयाँमा उपभोक्ताले किन्न पाउनेछन् । हाल स्थानीयले बजारबाट प्रतिक्विन्टल १२ देखि २० हजार रुपैयाँसम्ममा किनेर चामल उपभोग गरिरहेका छन् ।
Previous articleभर्खरै आयो निक्कै दु’खद् ख’ बर, त्रिशूलीमा नदीमा गाडी ख’स्यो, ठुलो क्ष”ति !Trisuli River
Next articleआमा बाबु नै बेपत्ता भएसी तीन जना नानी बाबु को बि’जोक, पुगे भोज राज थापा (भिडियो हेर्नुहोस्)